I-Semalt ichaza izinkolelo eziyi-5 ezilimaza i-SEO Idumela
Nakuba imikhuba ye-SEO ikhuthaza ukuzihlola ngokuziphendulela nokuzivikela kwangemuva, wenakuzomangala eminye imiphumela ephezulu efika lapho usesha igama elithi 'SEO'. Eqinisweni, i-Google ngokuzenzekelayo ihlukumeza ngokuzenzakalelayoukuphawula eduze kwegama SEO. Lokhu kuholela ekuqapheliseni ukuthi lo mkhuba uzizuzile idumela elibi lapho.
Ngokuyinhloko, i-SEO ihlinzeka ngokuzenzakalelayo kwe-bots engine kanye nezinsipho zokufinyelelaikhasi lewebhu, ukucacisa injongo yalo kanye nencazelo yalo futhi ekugcineni ubhale okuqukethwe kwayo ngezinkomba zesikhathi esizayo ngabasesho. Le nqubo yokuhlelaAmakhasi wewebhu enza kube lula futhi abhekane nabasebenzisi benjini yokusesha kanye nenjini yokusesha ngokwayo njengoba ingaveza imiphumela efanele yokusesha aumbuzo othize wokusesha.
Artem Abgarian, isazi esiholela phambili i-Semalt Amasevisi weDivaysi, uchaza ukuthi i-SEO inephi idumela elibi - google docs para escritorio.
1. Ama-imeyili angadingeki
I-SEO njengensimu entsha ekhulayo yokuzikhandla idonsa abaqalayo nabafundi. Kuukufuna ibhizinisi, lezi izinkampani ezibhekene nezinkampani zokuqala nezinkampani ezidumile ezinama-imeyili amaningi angahlosiwe okugcina ukugaxekile ngebhokisi lemilayezo engenayongesonto onke. Indlela abaningi abathi bangabachwepheshe ababeka ngayo njengabantu abakhohlisayo nabakhohlisi ngakho-ke idumela elibiemakethe. Ezimweni eziningi, ama-imeyili athembisa ukulungisa izinkinga eziningi zezinkampani ezibhekiswe ekukholweni. Kubuye kwenzeke nokuthi ezinye zazoI-self-proclaimed SEO ochwepheshe bayamangalela ngempela.
Igama elingukhiye yisisekelo se-SEO. Sebenzisa kahle futhi uvune imiphumela oyifunayo. Ngaphakathiukubheka okufanayo, ngenhloso noma ngokuphindaphindiwe ukuphindaphinda nokugxilisa amagama angukhiye ukuze kusebenze imiphumela yosesho yosesho ezinhlawulo ezinkulu futhi ubuhlunguInhloso yokwamukela i-SEO. Ubunikazi bakho begama elingukhiye we-athikili kumele kube kuhle njengoba kuwanele ukuthola isimo esihle futhi ugweme aisijeziso kusuka izinjini.
3. Amakhasi e-Cloaking ne-Doorway
Lo mkhuba wokukhiqiza okukodwa uhilela ukusebenzisa amakhodi we-HTML kokuqukethweisihloko esithize ngenjongo yokusebenzisa ukufakwa ohlwini nokubeka. Uma umsebenzisi echofoza kusixhumanisi noma ekhasini, aqondiswa kwenye engavumelaniIwebhusayithi yezinto eziqondile ezichaza ukuthi zisetshenziselwa ukuhambisa ithrafikhi kuwebhusayithi yokuqala. Ama-cloaking namakhasi eminyango amasuukuphazamiseka kokubili umsebenzisi kanye nenjini yokusesha ngaleyo ndlela kudala idumela elibi.
4. Ukuhwebelana kwezixhumanisi
Sonke siyazi ukuthi i-SEO yamandla ine-e-commerce. Abanikazi bewebhusayithi nabasebenzi be-SEOuqaphele isidingo sokuhlanganisa le mandla ngakho-ke kubangelwa imikhuba efana nokuthenga izixhumanisi ukuze kusebenze izikhundla kwimibuto yosesho. Lezi zixhumanisiukukhohliswa ngokuzenzakalelayo izinjini zokusesha ngokudala isikhulu sekhasi lesifake ngaphandle kokuthola. Noma kunjalo, izinjini ezinjalo ezifanele njengeGoogle ziyiukubambelela kulo mkhuba kanye nokufaka imali enhle kakhulu kumacala.
5. Okuqukethwe okufihliwe nezixhumanisi
Inqubo ehlakaniphile nekhohlisayo esetshenziselwa ukufihla noma ukubonisa okuqukethwe okuhlukile kulokhoumsebenzisi uchofoza. Kubonakala njengombhalo ngemuva kwesithombe noma umbhalo omhlophe ongenhla emhlophe. Ochwepheshe be-SEO abaqotho futhi abahloniphekile kukhonaakunakwenzeka ukusebenzisa le mboni nakuba isaziwayo futhi iduma i-SEO idumela.
Zonke izimboni zizwa futhi ziphikisana nezinselele eziphathelene nokuziphatha ngokuphathelene nokuziphatha. II-SEO imboni iyaphendula futhi ilandele umkhuba ongenzi ngendlela efanele.